Nnwom 52 NA-TWI - Onyankopɔn Atemmu ne Adom - Ɔkɛseɛ, - Bible Gateway
Nnwom 51Nnwom 53
Nnwom 52 Nkwa Asem (NA-TWI)
Onyankopɔn Atemmu ne Adom
52 Ɔkɛseɛ, adɛn nti na wohoahoa wo ho wɔ wo bɔne ho? Onyankopɔn dɔ wɔ hɔ daa. 2 Woyɛ nhyehyɛe de sɛe afoforo; wo tɛkrɛma yɛ nnam sɛ oyiwan. Bere biara wopɛ atoro foforo twa. 3 W’ani gye bɔne ho sen papa. Saa ara na w’ani gye atoro ho sen nokware. 4 W’ani gye sɛ wode w’anom nsɛm pira afoforo; wo ɔtorofo!
5 Eyi nti, Onyankopɔn bɛsɛe wo pasaa; ɔbɛkyere wo, na watwe wo afi wo fi. Obeyi wo afi ateasefo mu. 6 Atreneefo behu eyi na wɔasuro; na wɔbɛserew wo aka se, 7 “Hwɛ, oyi ne onipa a wamfa ne ho anto Onyankopɔn so ampɛ nkwagye no. Mmom, ɔde ne ho too n’ahonya dodow so na ɔpɛɛ guankɔbea wɔ amumɔyɛ mu.”
8 Nanso mete sɛ ngodua a ɛrenyin wɔ Onyankopɔn fi. Mede me ho to ne dɔ a ɔdɔ me daadaa no so. 9 Daa mɛda wo ase, Onyankopɔn, wɔ nea woayɛ no so wɔ nnipa nyinaa anim. Mɛpae mu maka se, woyɛ trenee.